Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » I-WHO ilumkisa ngokuqhambuka okutsha, i-US ilawula ukuvalwa
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
The I-World Health Organization (WHO) ilumkise namhlanje ukuba umahluko we-Ômicron we-coronavirus entsha ubeka umngcipheko omkhulu wokuqhambuka kosulelo.
WHO Ulumkise amazwe angamalungu ali-194 ukuba ukuqhambuka okutsha kunokuba neziphumo ezibi, kodwa waphawula ukuba akukho kufa kubikiweyo ukuza kuthi ga ngoku ngenxa yolu hlobo lutsha.
Umongameli waseMelika uJoe Biden uthe kwintetho yakhe INdlu yeNdlu ukuba umahluko omtsha ngunobangela wenkxalabo, kodwa hayi ukothuka. NgokukaBiden, ukwahluka kuya kufika kumhlaba waseMelika kungekudala okanye kamva; ngoko ke, eyona ndlela ilungileyo ngalo mzuzu lugonyo.
NgoLwesine olandelayo, i INdlu yeNdlu, isihlalo sikarhulumente wase-United States, siza kukhupha isicwangciso esitsha sokujongana nobhubhane kunye nokwahluka kwawo ngexesha lasebusika. UJoe Biden uthe isicwangciso asizukubandakanya amanyathelo amatsha athintela ukuhamba kwabantu okanye equlathe iiagglomerations. “Ukuba abantu bayagonywa kwaye banxibe iimaski, akukho mfuneko yokuvalelwa okutsha,” utshilo.
Umongameli ugxininise, nangona kunjalo, ukuba kusazakuthatha iiveki ezimbalwa ukungqina ukusebenza koogonyeli abakhoyo ngokuchasene ne-Ômicron.
Ingcaphephe yezempilo u-Anthony Fauci, umcebisi kurhulumente malunga nenyathelo lokulwa nobhubhane, uthe ilizwe "ngokucacileyo likwisilumkiso esibomvu." “Ngokuqinisekileyo iya kusasazeka ngokubanzi,” utshilo kudliwano-ndlebe nothungelwano lukamabonwakude ngoMgqibelo ophelileyo.
Ngokoqikelelo ukusuka WHO kunye neearhente zempilo zamazwe ngamazwe, inani leemeko zokwahluka kwe-Ômicron kulindeleke ukuba lidlule kwi-10,000 kule veki, xa kuthelekiswa neerekhodi ezingama-300 ezenziwe kwiveki ephelileyo, uxelele uNjingalwazi Salim Abdool Karim, ingcali yezifo ezosulelayo esebenza ukulwa nobhubhane kurhulumente wasezantsi. umAfrika.
Umongameli woMzantsi Afrika, uCyril Ramaphosa, ugxeke umnatha wonxibelelwano into awayibiza ngokuba “yindlela engafanelekanga nengenabunzululwazi” malunga nelizwe. KuRamaphosa, ukuvalwa kwemida kunye nokuvalwa kweenqwelomoya ezisuka kumazwe akumazantsi e-Afrika kulimaza kakhulu uqoqosho oluxhomekeke kukhenketho, ukongeza ekubeni "luhlobo lwesohlwayo kwisakhono sesayensi sokubona izinto ezintsha ezahlukeneyo".
Umongameli woMzantsi Afrika umemelele abasemagunyeni bamazwe ngamazwe ukuba bangazimiseli izithintelo kwiinqwelomoya eziya kulo mmandla.